I-Japan Inombolo Yezinombolo | Uhlu Lwamakhalekhukhwini | Database lakamuva Lokuposa
Japan Inombolo Yezinombolo
Database lakamuva Lokuposa » Japan Inombolo Yezinombolo
Japan Ucingo Izinombolo
Uhlu lwezinombolo zefoni eJapan lufake lapha uhlu lwezinombolo zocingo lwabathengi abangama-300K olunemininingwane ephelele. Sinikeza lonke uhlu lwezinombolo zabathengi oluvumelekile futhi oluvuselelekile kusuka eJapan ngesilinganiso eshibhile. Thenga uhlu lwezinombolo zefoni laseJapan nemininingwane ephelele yokuxhumana kwabathengi.
Uma uthuthukisa ibhizinisi lakho eJapan ungathenga lolu hlu lwezinombolo zocingo lwabathengi eJapan lapha. Ungathola lapha inombolo yefoni kamakhalekhukhwini, igama lokuxhumana, ikheli, idolobha, njll. Ungathenga le nombolo yocingo yaseJapan futhi uthuthukise ibhizinisi lakho elincane.
Thenga iJapan Consumer People Ucingo Ucingo
Izinombolo Zefoni Zonke: 300,000
Uhlu lwezinombolo zefoni labathengi baseJapan
Uhlu lwezinombolo zocingo lwabathengi baseJapan, lwaqoqwa ngokunembile oluhlanganisa imininingwane efanelekile yenkampani, nenombolo yabo yocingo, inombolo yeselula, amagama ebhizinisi, amadolobha namakhodi we-zip. Le nombolo yocingo yabathengi ihla kuhlu lwemininingwane eqondiswa enkampanini noma kubamukeli abalungile njengoba kudingeka ekuthengeni izingcingo, ukumaketha nge-imeyili, ukumaketha nge-sms ngisho nemikhankaso yokubiza amakhaza.
Okusemqoka empumelelweni ngohlu lwefoni yabathengi baseJapan ukusebenzisa zonke izinketho ezitholakalayo bese uhlela amathemba angaba khona. Hlunga futhi ukhombe amathemba akho amahle okukhulisa ukuthengisa, isikhathi nomzamo wokwenza ibhizinisi lakho liphumelele kakhudlwana. Uhlu lwabasebenzisi befoni baseJapan lunganikeza futhi ibhizinisi lakho ngohlu olunembile oluqondiwe lwabathengi oluqinisekisa ukuthi ungaxhumana namaklayenti akho okwamukela kakhulu.
Uhlu lwabathengi baseJapan Uhlu olusuka eDathabheni Lokumema Kamuva liqukethe imininingwane engu-300,000 ehlanganisiwe yohlu lwabathengi lwezinombolo ezifinyelela ku- $ 2,500 XNUMX, kungukukhokha ngesikhashana esithile nge-software elandelwayo engalandwa engaba ifomethi yefayela le-Excel CSV.
Uhla lwezinombolo zolwazi lwabathengi baseJapan lwenza ukuthi ungazikhandleli ukuthola iklayenti elibalulekile elingakusiza uthuthukise ibhizinisi lakho, i-database ephendulayo njengoba ungafunda futhi unqume ngendlela esheshayo. Inokuguquguquka okwakhelwe ngaphakathi kokuthi unciphise usesho lwakho futhi ubheke amathemba athile ozokwazi ukuwasebenzisa emkhankasweni wakho we-telemarketing, ukumaketha kwe-sms noma umkhankaso wokubiza amakhaza.
Japan Inombolo Yefoni Umbuzo & Impendulo